NASA oyiyi mgbanwe ihu igwe | Network Meteorology
NASA foto nke mgbanwe ihu igwe
Ka mbara ala ahụ na-ekpo ọkụ na ọnụ ọgụgụ ụmụ mmadụ na-abawanye, ọ na-adị mfe na mbara ala ịhụ mgbanwe ndị na-eme. Ọkụ ndị na-eso oké ọkọchị na ogologo oge, ọdọ mmiri na oké osimiri nke na-akpọnwụ, ihe omume ihu igwe dị ka ajọ ifufe ma ọ bụ oke mmiri ozuzo na-emebi emebi ...
Ma ọtụtụ oge anyị na-eche na ndị a bụ nanị okwu; nke ahụ ekwesịghị imetụta anyị. Kaosiladị, iche echiche nke ahụ adabaghị, maka na anyị niile bi n’otu ụwa, oge na-adịghị anya, anyị ga-ahụ nsogbu okpomoku zuru ụwa ọnụ na mpaghara anyị. Ka ọ dị ugbu a, anyị hapụrụ gị foto isii nke NASA sere nke mere ka ọ dị ezigbo adị.
3 Ọdọ Mmiri Poopó, nke dị na Bolivia
4 Oke Osimiri Aral, Central Asia
5 Ọdọ Powell, nke dị na United States
N’ihe onyonyo a ị ga - ahụ n’ókèala ice ndị ntorobịa kpuchiri, ya bụ, na mpụta pụtara n’oge na-adịbeghị anya, agbadatala site na 1.860.000km2 na Septemba 1984, ruo 110.000km2 na Septemba 2016. typedị ice a na - emetakarị okpomoku zuru ụwa ọnụ. dị ka ọ na-adị gịrịgịrị ma na-agbaze n’ụzọ dị mfe karị na ngwa ngwa.
Na Greenland, ọ dị mma na oge opupu ihe ubi ma ọ bụ mmalite mmiri iyi, osimiri na ọdọ mmiri na-etolite n'elu akwụkwọ ice. Agbanyeghị, agbaze nke ice bidoro n'isi mbido afọ 2016, nke na-egosi na ọgbụgba n'akụkụ a nke ụwa amalitela ịbụ nsogbu, na njọ.
Kemgbe 1898, Arapaho Glacier dị na Colorado ejirila ọkara ma ọ dịkarịa ala mita 40 gbadaa dị ka ndị ọkà mmụta sayensị si kwuo.
Ọdọ Mmiri Poopó, nke dị na Bolivia
Ọdọ Mmiri Poopó, nke dị na Bolivia, bụ otu n’ime ọdọ ndị mmadụ kacha erigbu, nke ji mmiri ya agba mmiri. Unwu bu kwa otu nsogbu ya, ya mere na o maghi ma oga agbake.
Oke Osimiri Aral, Central Asia
Oké Osimiri Aral, bụ ọdọ mmiri nke anọ kachasị ukwuu n'ụwa, bụ… ihe efu. Mpaghara ebe ọzara ebe mmiri na-adịbu na-agba agba owu na ihe ọkụkụ ndị ọzọ.
Ọdọ Powell, nke dị na United States
Oké ọkọchị na ogologo oge na Arizona na Utah (United States), yana ịwepụ mmiri, emeela ka mmiri dị na ọdọ mmiri a daa. Na Mee 2014 ọdọ mmiri dị na 42% nke ike ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe osise ndị a na ndị ọzọ, pịa ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » NASA foto nke mgbanwe ihu igwe
Kedu ụbọchị kachasị ụbọchị izu?